Ukuhlaziywa kwesixhobo se-iPhoneographer kuguqula ukujonga amanzi kwiNtloko | Iplum iyamangalisa
Aprili 1, 2015
iOS, iWatermark +, iindaba, kwama Press
Ukuhlaziywa kwesixhobo se-iPhoneographer kuguqula ukujonga izinto ngentloko
UMHLA: Ngomhla woku-1 ku-Epreli- 2015
IPrinceville, HI-Plum emangalisayo, LLC. Isakhono seWatermark sokwenza kunye nokusebenzisa ii-watermark ezibonakalayo ezingabonakaliyo okanye ezingabonakaliyo ukukhusela iifoto kunye neevidiyo zanceda ukuba ibe yinombolo yesi-5 kwii -apps ezili-100 ze-iOS zonyaka. Iziphumo ezibhengeziweyo 1/5/15 zinokufumaneka apha:
"IWaterMark + yeyona nto ilungileyo ye-watermark ye-iOS endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku." -Umfoti Terry White
I-iPhone / i-iPad ebalulekileyo, iApple yokuThengisa iiFoto zaBafoti, ukuSebenzisa kunye nokuSebenzisa. Uhlobo olutsha lwe-iOS 8 lokusebenza olusebenza njengesixhobo esizimeleyo okanye ulwandiso lokuhlela ifoto. Ngoku, okwesihlandlo sokuqala, beka ii-watermark ezibonakalayo okanye ezingabonakaliyo ngokuthe ngqo / ngokukhawuleza ngaphakathi kwefoto ka-Apple okanye ezinye iiapps usebenzisa iWatermark + njengesandiso sokuhlela ifoto se-iOS 8.
Ngokulula, khusela iifoto zakho ngeentlobo ezahlukeneyo zeewatermark zombini ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Iimpawu zamanzi, xa zongezwe kwifoto, bonisa ukuba yenziwe kwaye yeyakho. Ukubhengeza Watermark kubaluleke kakhulu kwaye kufana nokusayina igama lakho emfanekisweni. I-watermark inokubonisa ngobuqili, nokuba ifoto yakho iya phi, yeyakho. Iimpawu zokubukela ezibonakalayo zinokusetyenziselwa ukongeza i-imeyile, i-url, umyalezo wakho, utyikityo lwakho, iikhowudi zeQR okanye imifanekiso emnandi. Iimpawu ezingabonakaliyo, ezinje ngeMetadata eyahlukileyo kunye neeSteganographic ezikwiWatermark zinokusetyenziselwa ukongeza imethadatha okanye ulwazi lwe-steganographic njengegama lakho, ikhonkco kwishishini lakho kunye nolwazi lwamalungelo obunini nakweyiphi na ifoto.
* iyafumaneka kuwo onke amaqonga ama-4 i-iOS, iMac, iWindows kunye ne-Android.
* nge-2 ezingabonakaliyo + ezisi-7 ezibonakalayo = Iidonark ezili-9. Ezi-7 zibonakalayo sisicatshulwa, isicatshulwa kwi-arc, bitmap, veeter, umda, utyikityo, QR kunye neempawu ezi-2 ezingabonakaliyo ziimpawu zemethadata kunye ne-steganographic.
* ekhusela iifoto nevidiyo.
* Ukuhombisa kunye nokukrola isicatshulwa
* ngesikena sokutyikitya sokungenisa utyikityo lwakho okanye enye imizobo njengejamana. Sayina iifoto zakho njengoko benzile oopende beeklasi.
-Iifoto zihamba ngentsholongwane, emva koko zibhabha kwihlabathi jikelele. I-watermark enegama, i-imeyile okanye i-url ukuze ifoto yakho ibonakale kunye / okanye iziqinisekiso ezingabonakaliyo zonxibelelwano olusemthethweni kuwe.
- Yongeza ngokubonakalayo okanye ngokungabonakaliyo inkampani yakho, igama, iwebhusayithi, ulwazi lwe-copyright okanye ii-watermark eziqhelekileyo.
-Fumana ikhredithi ngendalo yakho.
Ixabiso: $ 3.99 okanye iTree Trial Version.
Izinto ezifunekayo: Nayiphi na i-iPhone okanye i-iPad ene-iOS 7 okanye i-8.
IWatermark + njenge iOS 8 yokuhlela ifoto yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokujonga ngokuthe ngqo kwiApple yeApple okanye ezinye iiapp. IWatermark + sisicelo esiqhelekileyo esivumela ukusetyenziswa kwewotshi enye okanye ezininzi ngaxeshanye ukubukela iifoto ezizodwa. IWatermark + kuphela kwesicelo esineentlobo ezili-9 zamanzi, okubhaliweyo, okubhaliweyo kwi-arc, bitmap, vector, border, signature, QR, metadata and steganographic. Isicatshulwa esibhaliweyo sinokusebenzisa i-tag metadata kwaye sibe nokufikelela kwiifonti ezingama-262 ngaphezulu nangayo nayiphi na enye insiza. Iimpawu zokubukela ezibonakalayo zivumela abasebenzisi ukuba bahlengahlengise isikali, i-opacity, ifonti, umbala, ibala, ubungakanani, indawo kunye ne-engile. Ngaphandle kwee-watermark ezibonakalayo ezi-4 kukho ii-watermark ezingabonakaliyo ezi-2 ezinokufaka iziqinisekiso zeefoto kwifayile kunye / okanye kwidatha yomfanekiso. Iimpawu zamanzi zinokwabelwana ngazo ngokupheleleyo kwi-Facebook, kwi-Instagram, kwi-Twitter, kwiAlbham yekhamera, kwibhodi eqhotyoshwayo okanye kwi-imeyile (iindlela ezintathu zokusombulula). I-Tumblr, iFlickr, iPineterest, i-Evernote, njl njl exhaswa nge-iOS 3 yokwabelana ngokwandiswa.
Khuphela / Thenga
Ngolwazi oluthe kratya: plumamazing.com
Lo myalezo uthunyelwe [kwidilesi ye-imeyile]. Hlaziya idilesi ye-imeyile Jonga kwi-Intanethi